Cali Yare, Author at Ceelhuur Online
Home > Articles Posted by Cali Yare
Author: Cali Yare
Howlgallo Dad lagu qabqabtay oo laga sameeyey Muqdisho iyo duleedkeeda
April 8, 2019 Cali Yare977
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan MagaladaMmuqdisho iyo deegaanka Ceelasha Biyaha. Ciidamada ayaa baaritaano guri guri ah waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan, Howl-Wadaag iyo Warta-Nabada,waxaana siweyn looga dareemay howlgalkaas Magalada Muqdisho. Sidoo kale Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa howlgal waxa ay ka […]
April 8, 2019 Cali Yare748
Waxaa maanta oo isniin ah baaqday shirkii Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ee ka dhici lahaa xarunta golaha Shacabka ee Magalada Muqdisho. Wali sii rasmii ah loma ogaa sababta keentay baaqashaday kulanka baarlamaanka Somalia hase ahaate ila xog ogaal ah ayaa sheegay ay baaqashada ay usababtahay guddoonka baarlamaanka Somalia oo wada dadaalo lagu doonayo in lagu […]
Eng Yariisow oo si Dadban u weeraray Golaha Shacabka
April 8, 2019 Cali Yare798
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in wixii ka dhacay Golaha Shacabka aysan dhici laheyn hadii Xildhibaanada Maalintii Jimcaha aheyd ay ka qeyb geli lahaayeen tartankii Orodka gaaban ee lagu qabtay Muqdisho. Waxa uu sheegay in dalkaan looga baahan yahay xasilooni siyaasadeed,isla markaana siyaasiyinta laga doonayo inay ogaadaan […]
Shirka Golayaasha sharci dejinta oo ka furmaya Garoowe
April 8, 2019 April 8, 2019 Cali Yare738
Maanta oo Isniin ah ayaa lagu wadaa in Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal uu ka furmo Shirka Shanaad ee Golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada. Shalay waxaa Garoowe gaaray gudoomiye kuxigeenka 2aad ee golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad iyo guddoomiyeyaasha Baarlamaanada Maamulada, Jubbaland , Koonfur Galbeed iyo hHr-Shabeelle, waxaana warar soo […]
Maamulka Hir-Shabeelle oo digniin u diray Hay’adaha Samafalka
April 7, 2019 Cali Yare778
Wasiir ku xigeenka Beeraha iyo Waraabka Maamul goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim”Daqare” ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey Maamulka Hir-Shabeelle lagu xaqiijiyey in Hay’adaha qaarkood ay musuq maasuq ku sameeyeen deeqaha loogu talo galay dadka Beeraleyda ah. Waxa uu sheegay in looga digayo Madaxda Hay’daha samafalka inay musuq maasuqaan deeqaha loogu talo galay Beeraleyda […]
April 7, 2019 Cali Yare741
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Sareeye Guute Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen Ciidamada Booliska Soomaaliya ay kusoo qabteen Xubno ka tirsan Shabaab,sidoo kalen ay fashiliyeen qaraxyo. Shir Jaraa’id oo ay ku qabatay Magalada Muqdisho ayaa waxa ay ku sheegtay in deegaanka Ceelasha Biyaha laga soo qabtay hub farabadan,sida Bambooyin, […]
Ciidanka Amniga oo qabtay xubin ka mid ah Shabaab
April 6, 2019 Cali Yare821
Howlgal ay Ciidamada Amnigu fuliyeen shantii bishaan Apriil ayaa lagu soo qabtay xubin muhiim ah oo ka tirsan Al-Shabaab islamarkaana qaabilsan ku xirista Walxaha Qarxa ee gaadiidka si uu waxyeelo u gaysto sidda ay sheegtay warbaahinta dowladda. Hawlgalku wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana uu qaatay muddo saacado ah sidii loo qorsheeyay ayuuna udhacay, iyadoo […]
Madaxda Laamaha Amniga oo baarlamaanka hortagaya
April 6, 2019 Cali Yare699
Maanta ayaa lagu waddaa in ay baarlamaanka hortaggaan Madaxda Laamaha Amniga dowladda Soomaaliya si wax looga weydiiyo Ammaanka Muqdisho oo sii xumaanaya. Wasiiradda Amniga, Difaaca, Taliyeyaasha Ciidamada Booliska , NISA iyo xoogga ayaa looga yeeray Baarlamaanka sidda uu horay u sheegay Gudoomiyaha Golaha Shacabka. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa su’aallo weydiin doona Mas’uuliyiinta Laamaha Amniga oo […]
Al-shabaab oo Doon Rasaas ku furay iyo qasaare ka dhashay
April 3, 2019 Cali Yare1009
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Marko ee Caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay rasaas la dhaceen doon Kalluumeysi oo maraysay inta u dhaxeysa degaanada Jilib Marko iyo Gandarshe. Gudoomiyihii hore ee degmada Marko Maxamed Cismaan Yariisow ayaa sheegay in doontaan ay lahaayeen Kalluumeysato Soomaaliyeed. Waxaa uu sheegay in uu geeriyooday […]
Muudey” Dastuur Somaliland ka maqan tahay Sax maha!
April 3, 2019 Cali Yare877
Guddoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka Cabdiwali Ibraahin Muuday ayaa sheegay in warbixinta Guddiga Dastuurka ee maanta lasoo bandhigay in laga reebay maamulka Somaliland, islamarkaana inta Somaliland ay maqan tahay uusan noqonkarin Mid saxan. Muudey ayaa sheegay in Caqabadaha haysta Dastuurka Soomaaliya, ay ka mid tahay Somaliland in aan lagu xusin warbixinta, islamarkaana wax wada tashi […]